နည်းပညာ – Hein Htet Kyaw
နည်းပညာ August 13, 2019
Bootable Stick လုပ်ဖို့အတွက် Software တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ အဲဒီထဲကမှ ကျွန်တော့လို ရှည်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ Command Prompt ကနေပြီးတစ်ဆင့် လုပ်ချင်တဲ့လူတွေ အတွက် နည်းလမ်းလေး ပေးလိုက်ပါတယ်။ Software တွေနဲ့လုပ်ရင်လဲ ရတယ်ဆိုပေမယ့် မလုပ်ချင်တဲ့လူတွေအတွက် Share ပေးချင်တာကတော့ . . . အရင်ဦးဆုံး Command Prompt လေးကို Right Click ထောက်ပြီး Run as Administrator လေးကို လုပ်လိုက်ပါ။ ပေါ်လာတဲ့ Box လေးမှာ Yes လေးနှိပ်ပေးလိုက်ရင် Command Prompt Box လေးပေါ်လာပြီပေါ့ :3 ပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ Memory Stick လေးကို ကွန်ပျူတာနဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး Command Prompt box မှာ diskpart လို့ရိုက်လိုက်ပါ။ ဆိုလိုတာကတော့ Window Built-in ပါပြီးသားဖြစ်တဲ့ diskpart Software ကိုခေါ်လိုက်တာမျိုးပေါ့။ အဲဒါပြီးသွားရင်တော့ list disk လို့ရိုက်လိုက်ပါ။ ကွန်ပျူတာနဲ့ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ HDD ကော Memory…
ကျွန်တော်တို့ များသောအားဖြင့် Page အသစ်လုပ်ပြီး အဲဒီ Page ကို ကိုယ့် Timeline ထဲက Work မှာ ပြန်ထည့်ချင်ရင် ပြန်ရှာလို့မရတော့ဘူးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့ အဲဒီလိုဖြစ်တဲ့အတွက် နည်းလေးရှာပြီး လာသိမ်းထားတာပေါ့ xD Set Facebook…
Website ကြီးဝယ်ပြီး ဘာမှ မရေးဖြစ်တာလဲ ကြာပြီ ဆိုတော့ Domain က နှမြောဖို့ကောင်းနေကောပဲ . . . ကွန်ပျူတာ တစ်လုံးမှာ အရေးကြီးတာကတော့ Window တစ်ခုတင်ဖို့က လူတိုင်းလိုလိုအတွက် အရေးကြီးတဲ့ အပိုင်း…
ရှာလေတွေ့လေပေါ့လေ :3 စောစောကတွေ့ခဲ့ရင် အကောင်းသား အခုတော့ နောက်ကျသွားပြီပေါ့လေ။ ၂ ခါမောရအုံးမယ် xD !! Linux သုံးပြီးတော့ HDD ကို External HDD အဖြစ် Data Backup လောက်ပဲလုပ်ပါတော့မယ်လေဆိုပြီးတော့…
အစကတော့ bootstrap4ရဲ့ Local documentation ကို offline ကြည့်လို့ရအောင် သွင်းလိုက်ရင်းကနေပြီး တက်လိုက်တဲ့ Error တွေဆိုတာ နည်းနည်းနောနောမှမဟုတ်တာကို :3 ဘာကြောင့်တက်တယ်တော့မသိဘူးဆိုပေမယ့် … တက်သမျှ ဒိုင်ခံရှင်းနေရတယ် (…